GRIM TALLY Britain nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ọgụgụ nwụrụ anwụ n'ụwa niile na-egbu mmadụ 935 kwa ụbọchị, nchọpụta na-achọpụta
UKARA nwere ọnụọgụ kachasị elu site na coronavirus n'ụwa, nyocha ọhụụ ekpughela. Britain agafela Czech Republic, bụ nke hụrụ ọtụtụ Coviddeaths site na Jenụwarị 11, dị ka data kachasị ọhụrụ. Britain nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ọnwụ Covid n'ụwa, yana ụlọ ọgwụ ...
GMB Dr Hilary na-enye ezigbo ịdọ aka ná ntị banyere àgwà ụlọ ahịa 'gịnị kpatara ị ga-etinye onwe gị n'ihe ize ndụ?'
Dr Morning Britain nke Good Morning Hilary Jones adọla ndị na-ekiri ya aka na ntị ka ha kpachara anya na nnukwu ụlọ ahịa ma cheta na ha agaghị ewere ihe ma weghachite ha. Dr Hilary na ndị ọbịa Piers Morgan na Susanna Reid na-ekwurịta ma anyị ka kwesịrị ịkpachara anya maka ịgbasa ...
N’oge na-adịbeghị anya, otu onye ọrụ ibe anyị n’ụlọ ọrụ anyị lụrụ nwanyị, ndị ọrụ ibe anyị nile enwekwala obi ụtọ maka ha
N’oge na-adịbeghị anya, otu onye ọrụ ibe anyị n’ụlọ ọrụ anyị lụrụ nwanyị, ndị ọrụ ibe anyị nile enwekwala obi ụtọ maka ha. Ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị kwadoro ezumike agbamakwụkwọ ha, kamakwa hazie nnọkọ oriri pụrụ iche, iji gọzie ha ruo mgbe ebighi ebi. Factorylọ ọrụ anyị na-agbakwunye oke ikike ụmụ mmadụ na ...
N’ọnwa a anyị butere ngwaahịa ngwaahịa 3 * 40 n’ịdị elu dị na Europe, South America, na USA, akpa na-ebu paịlị na akpa ụlọ ahịa compostable
N’ọnwa a anyị zigara ngwaahịa 3 * 40 n’ịdị elu cube na Europe, South America, na USA, akpa na-ebu paịlet na akpa ịzụ ahịa compostable. Anyị na-agba ama ugbu a na mmasi na-arịwanye elu n'ibelata ojiji nke rọba ọdịnala, ma ndị ahịa ma, ọkachasị, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọtụtụ ...
Anyị factory ẹkenam a ogbe nke ọhụrụ ígwè na akụrụngwa na December 2020
Anyị factory ẹkenam a ogbe nke ọhụrụ igwe na akụrụngwa na December 2020, na nsonye 2 * film ịfụ igwe, 1 ígwè obibi akwụkwọ igwe na 3 akpa Ndinam igwe. Dị ka a na-eduga ụlọ ọrụ mmepụta ihe na biodegradable akpa ụlọ ọrụ, iwu e-amụba, na Iji izute ahịa mkpa, otú .. machiner ...